Umshado we-Navka no-Peskov uzokhokhwa ngumabhizinisi u-Oleg Deripaska?
Owesomabhizinisi u-Oleg Deripaska usekulungisele isipho somshado kaDmitry Peskov noTatyana Navka. Ngokusho kwamahemuhemu, umnikazi wehhotela elibizayo kunazo zonke eziseBlack Sea ogwini oluthile, iSochi Rodina Grand Hotel & SPA, lapho imikhosi ezinikezelwe emshadweni kaNobhala weMongameli kaMengameli kanye nomuntu odumile we-skater kuyokwenzeka, ithathe zonke izindleko zokuhlela "umshado wekhulu". Kuyaziwa ukuthi izihlobo zalowo mbhangqwana kanye nezivakashi eziyikhulu ze-VIP zimenywa emkhosini.
Isithombe somshado we-Navka nePerkov, kanye nemininingwane yesipho sama-ruble ayizigidi ezingu-37, bheka futhi ufunde lapha .
Isipho somshado kuDmitry Peskov noTatiana Navka abavela ku-Oleg Deripaska
UDmitry Peskov noTatyana Navka bazoshada eSochi ngo-Agasti 1. Imicimbi yomshado izokwenzeka endaweni yangaphambili yamaholide yoMkhandlu WeziNgqongqoshe we-USSR, futhi manje - iGrhotel Rodina, kusukela ngomhlaka-1 kuya ku-3 Agasti. Izivakashi zizoqala ukuhlala ngoJulayi 31. Umkhosi uzokwenzeka ophahleni lwehhotela, endaweni yokudlela "Izulu".
Uhlelo lwe "Notepad", olubhekisela emthonjeni ovela ekuphathweni kwehhotela, lwazisa ukuthi umninikhaya wezindlu zokuhlala u-Oleg Deripaska uhlanganisa zonke izindleko zokwamukelwa, indawo yokuhlala nokuzijabulisa kwabashadayo kanye nezivakashi zabo eziphezulu, abangane nezihlobo, futhi lokhu kuyoba uhlobo lwesipho somshado kumakoti nomkhwenyana we-oligarch . Abashadayo bazonikezwa isipho somzimba, kodwa kuzogcinwa imfihlo kubasebenzi.
Ngesikhathi esifanayo, abamele "inkosi yase-aluminium" u-Oleg Deripaska, inkampani yakhe ingowokuGorhotel "Rodina", akaqinisekisi izindaba zakamuva mayelana "nesipho" sakhe.
Ihotela lihlelwe njengehhotela lokunethezeka. Lena indawo eyimfihlo evaliwe. Kuyaziwa ukuthi izindleko zamafulethi ekilasini le-Suite ne-Deluxe ngosuku livela kuma-ruble angu-25 kuya ku-120 ayizinkulungwane. Isakhiwo esihlukile sigcinwa kubalindi nabalindi bokuphepha. Kukhona izinombolo ezibiza kusuka kuma-ruble angu-8 kuya ku-14. Izindleko zenani eliphelele lamakamelo ngosuku lizoba yizigidi eziyi-1 000 ze-ruble eziyizinkulungwane ezingu-876. Ihhotela linezindawo zokudlela eziningana nemigoqo, izindawo ze-spa nezokungcebeleka. Izindleko ezijwayelekile zemenyu ekudleni kwehhotela "I-Black Magnolia" iqala kusuka kumakhilomitha angu-4 nengxenye ngomuntu ngamunye. Egwini lolwandle ungabheka phansi i-elevator. Izitshalo ezingavamile zitshalwe ensimini yehhotela, futhi izinqola zegalofu zinikwe izivakashi.
U-Bachelor Alexei Vorobyov wabika ngokukhulelwa kwentombi yakhe kanye nomshado ozayo, ividiyo
UGuillaume Depardieu, umlingisi, biography
Indoda yangaphambili kaTatyana Navka ngeke ihambe emshadweni wayo
UKack Winslet ukhulelwe ingane yesine?
I-Mackerel ngamakhambi kanye ne-lemon ebhakawa
Indlela yokwazi ubulili bomntwana
Umshado, umndeni, ubudlelwane bomshado
Ungasusa kanjani amafolda e-nasolabial
Ama-eggplants nge-pomegranate seasoning